ကလေးဆိုးကြီးမောင် – Grab Love Story
အိမ်မှာက ကျမက ဒုတိယအကြီးဆုံးသမီးပါ။ ဖေဖေကလည်း လိုက်သွားဆိုလို့ပါ။ ကျန်တဲ့ကလေးတွေက ကျောင်းတက်တုန်းလေ၊ အကိုအကြီးဆုံးက ကျန်းမာရေးက မကောင်းဘူး၊ ဖေဖေက အိမ်စီးပွားရေးကို လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တုန်းပါ။ ရန်ကုန်ကိုရောက်ပြီးတော့ ကျမက ရန်ကုန်မြို့နယ်တစ်ခုက စာသင်ကျောင်းကြီးတစ်ခုမှာ တာဝန်ကျတယ်။ အဲဒီမှာ မောင့်ကိုစသိတာပဲ။ မောင်က Drawing တွေလာပေးတော့ မှတ်မှတ်ရရ သတိထားခဲ့တယ်။ မောင့်ဆရာတွေနှင့် ကျောင်းနေရာလာချတော့ မောင်က မြေတိုင်းပြီးတော့ ရုံးပေါ်ကိုတက်ခဲ့တယ်။ ဆရာကလည်း မောင့်ကိုအရေးပေးတာကို သတိထားမိတယ်လေ၊ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် မောင်က ဆရာတွေကိုတင်ပြနေတာ မ..လေ. မောင့်ကိုခိုင်သွားတာပေါ့၊ အဲဒီမှာ မောင့်ဆရာက ကျနော့်ရုံးချုပ်က ဒီကနေဝေးတယ်။ “တကယ်လို့သာ. ဒဇိုင်းပိုင်းနှင့်ပတ်သက်လို့ မေးချင်ရင် ကျနော်တပည့်ဇော်မိုးရှိတယ်၊ ဒီနားမှာရုံးခွဲရှိတယ်၊ ဒီကနေ သုံးလမ်းမြောက်မှာပါ” ကျမဝမ်းသာသွားတယ်။ ကျမလည်း အခုမှလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တာဆိုတော့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအကြောင်း သိပ်ငန်းအကြောင်း သိပ်မသိသေးဘူး။ မေးရမှာပေါ့။ ကျမတို့ဆိုဒ်မှာ အင်ဂျင်နီယာရှိပါတယ်။ သူကလည်း အခုမှကျောင်းဆင်းပါပဲ။ စာရင်းကိုင် မိန်းကလေးတစ်ယောက်လည်း ရှိတယ်။ အစကတော့ စာရင်းကိုင်နှင့် ကျမအဆင်ပြေပါတယ်။ မောင်က တစ်ခါတစ်လေ ဆိုဒ်တွေပတ်ကြည့်တာတွေ့တော့ ကျမခေါ်ရမှာ ရှက်နေလို့မခေါ်ဖြစ်ဘူး။ ကျမသူ့ရှေ့က ခဏခဏဖြတ်ပြတာတောင် အရေးမလုပ်ဘူးလေ၊ ကျမက တိတ်တခိုး၊ တဖင်သတ်ချစ်နေရတာလေ။ ကျမလည်း မနေနိုင်တော့ဘူး၊ အင်ဂျင်နီယာကို အကြောင်းပြပြီး ကန်ထရိုင်ကို အကူအညီတောင်းကာ ခေါ်လိုက်ရတော့တယ်။. “”ကျနော့်ကိုခေါ်တယ်ဆိုလို့ပါ” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ရုံးပေါ်တက်ပါဦး” “ဟုတ်ကဲ့ ဘာများမေးစရာရှိလဲဗျ” “ဟိုလေ.သံချောင်းတွေဆက်တဲ့စနစ်နှင့် တွက်ပုံတွက်နည်းပါ” “ဗျာ… ကျနော်က Drawing အကြောင်း မေးမလို့လားဆိုပြီး လာတာပါ” “အင်းးကျမက အခုလက်ထောက်မန်နေဂျာ ငြိမ်းငြိမ်းပါ” “ဟုတ်ကဲ့” “ကျမက တွက်ချက်မွု့တွေလည်း စစ်ရပါတယ်၊ ပစ္စည်းလည်း မှာရတယ်၊ ကျမနားမလည်ပဲ စစ်နေရင် ဘာမှအဓီပ္ပါယ်မရှိဘူးလေ၊ လုပ်ရသူလည်း စိတ်ညစ်ရတယ်၊ အဲဒါကြောင့် သင်ပေးပါလားရှင်” “အင်း..သံချောင်းဆက်တာတွေက spec ပေးထားပါတယ်ဗျ၊ မရှိရင်ရုံးလာတောင့်လှည့်ပါ။
သင်ပေးတာကျတော့ ချက်ချင်းမရနိုင်ဘူး၊ သူက အနည်းဆုံးတပါတ်လောက်ကြာပါမယ်” “ကျမတို့ကိုသင်ပေးပါ” “သင်ပေးတာလည်းရပါတယ်.. ကျနော်က ရုံးထိုင်တယ်၊ ခေါင်းဆောင်က အမြဲမလာနိုင်လို့ ရုံးခွဲမှာလောလောဆယ် ကျနော်တစ်ယောက်တည်းပဲ ရှိနေတယ်ဗျ” “ကျမရုံးလာခဲ့ရမလား” “ကျနော်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်၊ လာရင်လည်း နှစ်ယောက်လာပါ” ကျမဝမ်းသာသွားသလို မောင့်ကိုလည်း စိတ်ကလေးစားသွားတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ထဲကို ရအောင်ခေါ်မယ် ချက်ချင်းပဲ သူဆီကိုသွားပြီး စာအုပ်တောင်းလိုက်ကြီး ရေလာမြောင်းပေးလုပ်ရတာပေါ့” “မငြိမ်းငြိမ်း.ဒီမှာစာအုပ်တွေပါ” “ကျမကိုရှင်းပြပါဦး” သူက သံချောင်းဆက်နည်း သဘောတရားတွေကို အကြမ်းဖျဉ်းရှင်းပြတယ်။ ကျမသိချင်တာတွေ အများကြီးပါ။ သူ့အကြောင်းလည်း သိချင်တယ်၊ ဒီလိုနှင့်သူက အိမ်မပြန်ပဲ ရုံးမှာသူငယ်ချင်းတွေနှင့်နေတာ ကျမသိလိုက်ရတယ်။ သူစားတဲ့ထမင်းဆိုင်က ကျမတို့အနားမှာလေ။ ကျမသူလာမှ ထမင်းစားထွက်တယ်၊ အဲသလိုလုပ်ရင်း စာရင်းကိုင်က ကျမကို မခေါ်မပြောနိုင်ဖြစ်လာတယ်။ ကျမရိပ်မိတယ်၊ သူလည်း မောင့်ကိုကြိုက်နေတာ၊ ကျမက လက်ဦးမွု့ယူတယ်ဆိုပြီး မကျေနပ်တာလေ။ ကျမတို့ရုံးဖက်ကို မောင်ရောက်ရင် သူ့ရန်လည်း ကြောက်ရတာမို့ နောက်ဆို မောင့်ရုံးကိုပဲ ကျမသွားတယ်။ သူတစ်ယောက်ထဲရှိနေရင် ကျမက အခန်းတွေဘာတွေ ရှင်းပေးပါတယ်။ ဒီလိုနှင့်ရေလာမြောင်းပေးလုပ်ရင်း ကျမကို မောင်က ချစ်စကားကြိုက်စကားပြောတယ်။ ကျမအရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချက်ချင်းအဖြေမပေးလိုက်ဘူး၊ တပတ်ကြာတော့ ရွေတိဂုံဘုရားကို ချိန်းတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ပေါ့။ သူရောကျမရော အလုပ်ပိတ်တယ်။ ဘုရားဖူးပြီးတော့ “မောင်” “ကျနော့်ကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ်” “မောင်လို့” “ဟာဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ” “ခစ်..ခစ်..ခစ်” “ကျနော့်ကိုချစ်တာပေါ့နှော်” “ဟွန်း..ချစ်လို့ပဲမောင်လို့ခေါ်တာ” သူကျမကိုဖက်မလို့ကြံတယ်။ “မောင်ဘုရားပေါ်မှာနှော်” “အော်..ဟုတ်ကဲ့၊ ဟုတ်ကဲ့” “ကဲပြန်မယ်လေမောင်” “မ..ကျနော်ရုံးကိုလိုက်ခဲ့ပါလား” “မသွားချင်ပါဘူး” “မောင့်တပည့်တွေရောက်နေပါတယ် မရဲ့၊ သူတို့ကို ဝက်သာတုတ်ထိုးလုပ်ခိုင်းထာတယ်၊ တပည့်တယောက်က အချဉ်ရည်စပ်တာ တော်တယ်။ ဝက်ကလီစာ တခြမ်းလာပို့ထားတယ်။ “အယ်အများကြီးပါလား” “ဟုတ်တယ်၊တပည့်ထဲမှာ ဝက်သားဒိုင်လည်း ရှိတယ်” “ဝက်သတ်တဲ့လူတွေနှင့်လည်း ပေါင်းတာလားမောင်” “အင်းးခင်နေကြတာ” “လိုက်ခဲ့မယ်လေ” အဲဒီနေ့ကမောင့်ဆီမှာပဲ ထမင်းစားဖြစ်တယ်၊ ဝက်သားအိုးက အကြီးကြီး သူ့သူငယ်ချင်းတွေ လာကြတယ်၊ ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာရှင်၊ နောက်ရက်တွေလည်း သူက ကျမဆီလာတယ်၊ အဆောင်ပြန်လည်း လိုက်ပို့တယ်။
ကျမက နောက်ဆို မောင့်ကိုအလုပ်ထဲမလာခိုင်းဘူး၊ ဟိုကောင်မကလည်း ရေလာမြောင်းပေးလုပ်တယ်၊ မောင့်လိုငယ်ရွယ်တဲ့သူက ပါသွားမှာလေ၊ ကျမပဲ မောင့်ဆီသွားဖြစ်တာ၊ မောင်ဆီရောက်ရင် မောင်ကနမ်းတယ်။ ကျမလည်း တုန့်ပြန်နမ်းတယ်။ ကျမက ရည်းစားထားဖူးတာမို့ မောင့်ထက်တောင် နမ်းတာကျွမ်းသေးတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိလို့ ကျမလေဘော်လီကို ကြည်းသီးသာမက တွယ်ချိတ်ကိုအတွင်းက ထိုးထားတာ၊ ချက်ချင်းဖြုတ်မရအောင်ပွေါ။ တနေ့တော့ တနင်္ဂနွေနေ့ မောင့်ဆီသွားလိုက်တယ်။ မောင်က အဝတ်တွေလျော်နေတာလေ၊ ပုဆိုးရေစိုကြီးနှင့်ပေါ့၊ “မောင်အဝတ်တွေလျော်နေတာလား” “ဟုတ်တယ် မ” “မ.လျော်ပေးမယ်လေ” “မလုပ်ပါနှင့်မရယ်၊ မအဝတ်အစားတွေ စိုကုန်ပါ့မယ်” “ရပါတယ်..မောင်၊ မောင့်လုံချည်တစ်ထည်နှင့် အကျီင်္တစ်ထည်ပေး၊ လဲဝတ်လိုက်မယ်” “ဟာ ရပါတယ် မ” ကျမကမောင့်ပုဆိုးအဟောင်းတစ်ထည် ယူဝတ်လိုက်ပြီး၊ အကျီင်္ကိုခေါင်းပေါ်က ချွတ်လိုက်တယ်။ မောင်နေကျမကို ဖက်ထားလိုက်တယ်။ “အာ.မောင်ဘာလုပ်တာလဲ” “မောင်..မကိုအရမ်းချစ်တယ်ဗျာ” ကျမကို ဖင်ပြီးမျက်နှာအနှံ့နမ်းတယ်၊ ကျမရင်ထဲ ဒီစကားလေးကြားရတာ လှိုက်ပြီးခံစားလိုက်ရတယ်။ ကျမနွုတ်ခမ်းကို လာနမ်းတော့ ကျမလည်းပြန်နမ်းတယ်။ မောင်ကနမ်းရင်းနှင့် ကျမဘော်လီကိုဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစာတယ်လေ၊ ဘယ်လိုမှဖြုတ်မရဘူး။ “မ..မောင်ချိုစို့ချင်တယ်ကွာ” “အာ.မောင်ကလည်း” “လုပ်ပါ၊ မောင်ချွတ်မရလို့” ကျမပဲချွတ်လိုက်ရတယရှင် သူက သူ့ကုတင်နားခေါ်ကာ ကျမကိုထိုင်ခိုင်းတယ်။ ကျမလည်း ထိုင်လိုက်တော့ မောင်က ကျမအပေါ်ကနေနို့စို့တယ်။
“လှလိုက်တာမရယ်၊ နို့သီးခေါင်းလေးက နီရဲနေတာပဲဗျာ” “အာ..မောင်လည်းရှက်စရာကြီး” “မောင်က တကယ်ပြောနိုင်ငံခြားမင်းသမီးလို ဝိုင်းစက်ပြီး၊ မာမာလေး၊” “ဟာကွာမောင်” အဲလိုပြောလေ၊ ရင်တွေခုန်လေပါပဲ၊ “ပြွတ်…ပြွတ်..ပြွတ်” “အာ့မောင်ရယ် ဖြေးဖြေးစို့ပါကွယ်” နို့စို့ခံရယုံနှင့် ကျမတကိုယ်လုံး ကြက်သီးဘုလေးတွေပါထလာတယ်။ “ပြွတ်..ပြွတ်.ပလပ်..ပလပ်” “အာ့..အင့်ဟင်းးဟင်းးးမောင်ရယ်” မောင်လေနို့စို့ယုံစို့တာမဟုတ်ဘူး၊ နို့သီးခေါင်းတွေကိုပါ လျှာဖျားနှင့်ယက်တာလေ၊ နို့အုံကြီးတွေကိုပါ ယက်လိုက် စို့လိုက်လုပ်တာ၊ ကျမမှာ ပိပိထဲက အရည်ကြည်တွေထွက်လာတယ်။ သူလေနို့စို့ရင်း ကျမဝတ်ထားတဲ့ပုဆိုးကို ခြေထောက်နှင့် ညှပ်ပြီးဆွဲချွတ်တယ်။ “အာ..မောင်မလုပ်နှင့်လေ’” “မ.ဘာကြောက်နေတာလဲ၊ မောင်နှင့်မလက်ထပ်မှာပဲ” “မောင်က တကယ်လက်ထပ်မှာလား” “ချစ်သူထားတာ လက်ထပ်မလို့ပေါ့ မရယ်” ကျမရင်ထဲမှာ တကယ်ပဲပျော်သွားတယ်။ လက်ထပ်မယ်ဆိုမှတော့ ကျမဘာပူစရာလိုတော့လဲ။ ကျမအပျိုစင်ဘဝကို မောင့်တွက် စွန့်လွတ်ရဲတယ်လေ၊ မောင်လုပ်ချင်တာကို မတွန့်မတိုပဲ ခွင့်ပြုလိုက်တော့တယ်။ မောင်လေကျမပင်တီကို ချွတ်မယ်လုပ်တော့၊ “မောင်မလုပ်နှင့်.မချွတ်ပေးမယ်” ကျမလေပင်တီထဲမှာ အရည်တွေ စိုချွဲပြီးနေမှာကို သိတယ်၊ မောင်သိသွားရင် ရှက်လွန်းလို့ မောင့်မျက်နှာကိုကြည့်ရဲမှာ မဟုတ်ဘူးလေ၊ အဲဒီတော့ ပင်တီကိုချွတ်ပြီး အိပ်ရာအောက် လုံးထွေးပြီး သွင်းလိုက်တော့တယ်။ ပြီးတော့ ကျမအိပ်ရာပေါ် ပြန်လှဲလိုက်တာပေါ့ရှင်။ မောင်ကနို့စို့ရင်းနှင့် သူ့လုံချည်ကိုချွတ်ချတယ်၊၊ အမလေး နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး၊ လုံးပတ် တစ်လက္မလောက်ရှိတယ်။ အရှည်က ခြောက်လက်မကျော်လောက်ရှိတယ်ရှင်၊ တွေးပြီး လန့်သလိုရင်ခုန်သလိုကြီးပါ။
“မ..ကိုင့်ကြည့်ပါဦး” “ဟင့်အင်းရှက်တယ်” “ကိုင့်ကြည့်ပေးပါ” ကျမလည်းကိုင်ကြည့်လိုက်တယ်၊ ပူနွေးနွေးလေး၊ ထိပ်ဝမှာလည်း အရည်တွေစိုနေတာ၊၊ မောင်က ကျမလက်ကိုကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်လိုက်သေးတယ်။ “မ.အဲဒါဂွင်းတိုက်တာလို့ ခေါ်တယ်” “သိသားပဲ” “ဟင်ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ” “ကောင်လေးတွေ ပြောပြောနေတာပဲ” “ဟာဒါဆို.မွုတ်ပေးတာလည်း သိတာပေါ့နှော်” “…………………….” “မ..မောင့်ကိုမွုတ်ပေးပါလား” “လုပ်ချင်ပါဘူး” “မောင်အရင်လုပ်ပေးမယ်ကွာ၊ ပြီးတော့ မအလှည့်ပေါ့” “မလုပ်ပါနှင့်မောင်ရယ် မရှက်တယ်” “ရှက်စရာဘာလိုလဲ.. မရယ်၊ ဒါရှက်စရာမှ မဟုတ်တာ’” ပြောသာပြောရတယ်၊ လီးမြင်ကတည်းက စိတ်ကတစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတာလေ၊၊ လူတွေပြောတဲ့ ကာမစိတ်ပေါ့၊ ချစ်သူနှစ်ယောက်က လူမရှိတဲ့နေရာမှာ နှစ်ယောက်ချင်းလည်း တွေ့နေတာဆိုတော့.. စိတ်ထဲမှာ အရမ်းဖြစ်နေတာ၊ နို့စို့လိုက်ကတည်းက မောင့်ဘက်လုံးလုံးပါသွားတာလေ၊ မောင်ကပြောလည်း ပြောလုပ်လည်း လုပ်မယ်ဆိုတော့ ကျမအမွုတ်မခံရဲဘူး။ “မောင်..မကိုလုပ်မပေးနှင့် မကညစ်ပတ်နေမှာ ရေမဆေးရသေးဘူး၊ နောက်မှလုပ်ပေးမယ်၊သိလား” “အင်း.. ဒါဆို မောင်လုပ်တော့မယ်နှော်” “အင်း” မောင်က ကျမပေါင်ကြားထဲဝင်လာပြီး ကျမပေါင်ကိုမြှောက်ကာ ကားလိုက်တော့ ကျမလည်း အလိုက်သင့်လေး လုပ်ပေးလိုက်တယ်ရှင်။ မောင်ကလီးကြီးကိုင်ပြီး ကျမပိပိအကွဲကြောင်းတစ်လျောက် ပွတ်တိုက်တယ်။
အရည်တွေထွက်နေတဲ့ ကျမပိပိမှာ ကျင်ကနဲဖြစ်သွားတော့ ကျမတွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ “အ.အဟင့်.ဟင့်” လီးကပြွတ်ကနဲ.ဝင်လာတယ်။ အကြပ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ အဲလောက်အရည်တွေ ထွက်ပြီးချောနေတာ။ အထဲနည်းနည်းရောက်မှ တင်းကနဲဖြစ်သွားတာလေ၊ “ဗျစ်…ဗျစ်……ဗျစ်” လီးဝင်လာကတည်းက အာခြောက်သလို၊ ရင်တွေလည်း တဒိန်းဒိန်းခုန်နေတာ၊ တံတွေးကိုချည်း မြိုချနေရတယ်၊ စိတ်ထဲမှာ အလိုလိုညည်းချင်နေတာ၊ ထိန်းထားလေ၊ ပိုဖြစ်လေနှင့် ကျမနောက်တော့ အလိုလိုညည်းမိလာတယ်၊ “အင့်..ဟင်းးဟင်းးးးမောင်” “ဗျစ်…ဗျစ်……ဖောက်” “အာ့…..အိုးမောင်..ကျွတ်..ကျွတ်” လီးကြီးကပိပိထဲတိုးဝင်လာတယ်။ “အမလေးးလေးမောင်.နာတယ်” “”မနာသွားလား” မောင်ကဆက်မသွင်းပဲရပ်ပြီးပြောတယ်၊၊ နာပေမယ့် နာတာကို တဏှာကနိုင်သွားခဲ့ပြီလေ။ “အာ့.ရတယ်မောင်” မောင်က ကျမနို့ကိုစို့ပြီး ရှေ့မတိုးပဲလုပ်နေတာ။ ပိပိထဲ ပူနွေးနွေးလီးက သပ်လျှိုထားသလိုနှင့် ခံစားရပြီး နို့စို့ခံရတဲ့အခါ ကျမစိတ်ထဲမှာ လိုးတာပဲတောင့်တလာပြီး ညည်းမိတယ်လေ။ “ပြွတ်..ပြွတ်..ပြွတ်” ကလေးတစ်ယောက်လို ကျမချိူချိုတွေကိုစို့တယ်။ “အာ့…..အင်းးဟင့်..ဟင့်မောင်၊မ..နေရခက်တယ်.အာ့ရှီး..” မောင်လေနို့စို့ရင်းအဆုံးထိသွင်းလိုက်တယ်။ “ဗျစ်..ဗျစ်..ဘွတ်..ဖတ်” “အာ့…ရှိး..ရှီး…အားးးးး” လီးကအဆုံးထိသွင်းပြီးတော့မှ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ကို မောင်မြန်မြန်လေးလုပ်တော့တယ်။ “ဗျစ်…ဗျစ်…ဗျစ်..ဘွတ်..ဖတ်..ဖန်းး” “အာ့..အင့်ဟင်းးးးဟင်းးး” “ဇွိ..ဗျိ..ဗျစ်..ဘွတ်..ဖန်းးး” “အင်းးဟင်းးးဟင်းးး” ပြောပြလို့မရတဲ့ခံစားမွု့တွေက တိုးလို့သာလာတယ်။ ကောင်းလိုက်တာ၊ ဒါပေမယ့် ပြောလို့ မဖြစ်ဘူးလေ၊ ညည်းလို့သာနေတော့တယ်။ မောင်လေ. ပထမတော့ နောက်ကနေ လုပ်နေရာက ကျမပေါင်တွေကို ရှေ့တွန်းပြီး လက်ထောက်ကာ ခြေဆန့်လို့ အပေါ်ကနေဖိပြီး လုပ်လာတယ်၊ တချက်ဆောင့်တိုင်း အရမ်းကိုဇိမ်တွေ့တယ်၊ သူ့ဆီးခုံနှင့်ထိတိုင်း ကျမမှာ ကျင်ကနဲကျင်ကနဲ ဖြစ်လာတယ်။
စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုလိုနေရာက အလိုဆန္ဒပြည့်လာသလို ခံစားလာရတယ်။ “အင့်ဟင်းးဟင်းးး” အဲလိုဖြစ်လာလေကျမအသံပိုထွက်လေပဲ၊ “”ဗျစ်..ဗျစ်..ဘွတ်..ဘွတ်..ဖန်း..ဖန်းး ” ကျမအသံ ပိုထွက်လေ မောင်ကပိုပြီးကြမ်းလေ။ “အာ့..ရှီးးးရှီးး.အားးး” ကျမစိတ်ထဲတင်းကျပ်နေတာတွေ ပြေလျော့သွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ပိပိထဲမှာလည်း လွုပ်ရှားလာပြီး ဖင်ထဲက ညစ်လာသလိုဖြစ်ပြီး ဖင်ဝလည်း ပွစိပွစိဖြစ်လာတော့တယ်၊ နောက်တော့ ပိပိထဲက အရည်တွေထွက်သွားတော့တယ်၊ ကျမပြီးသွားပေမယ့် မောင်က ဆက်လုပ်နေတော့ ကျမလည်း ငြိမ်နေရတာပေါ့သိပ်မကြာဘူး။ “အား..ဟင်းးးးး” ဆိုကြီးပိပိထဲအရည်တွေပန်းထုတ်လိုက်ကာမှ ကျမလည်းလန့်သွားတော့တယ်။ မောင်က ရပ်လိုက်ပြီး ကျမဘေးနားမှာအိပ်ပြီး ကျမကိုဖက်ကာ အမောဖြေနေတယ်။ ပြီးမှ “မ..အဆင်ပြေလား” “အင်းးးး၊မပြေဘူး” “ဟင်.ဘာဖြစ်လို့လဲ” “ဟိုလေ..ဗိုက်ကြီးမှာကြောက်တယ်” “မကြောက်နှင့် မောင်ဆေးဝယ်ပေးမယ်” “အင်းးးး” “ခဏနှော်..မောင်ဆေးသွားဝယ်လိုက်ဦးမယ်” ဆိုပြီးထွက်သွားတော့ ကျမလည်း ရေချိုးခန်းဝင်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတယ်၊ ရေဆေးတော့ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်နေတာရယ်၊ တင်ပါးနှင့်ခါးအောင်သလို ပေါင်တွေအောင့်နေတာကြောင့် မောင့်အဝတ်တောင် မလျှော်ဖြစ်တော့ဘူး၊ ကိုယ့်အဝတ်အစားတွေပဲ ပြန်ဝတ်ပြီး မောင့်ကိုစောင့်ရတယ်။ မောင်ပြန်လာတော့ အချိုရည်ဘူးနှင့် မုန့်တွေဝယ်လာတယ်လေ။ “ရော့..မ.ဒီမှာဆေး” “ဘာဆေးလဲမောင်” “အီးဇီးတူးတဲ့..မ” “ဆေးက နှစ်လုံးတောင်” “ဟုတ်တယ်မ” “ဆယ်ယ့်နှစ်နာရီခြားသောက်ရတယ်၊ အခုသောက်လိုက်နှော်” “မောင်ဒီဆေးက ဘာပြသနာမှမရှိဘူးနှော်” “မရှိဘူးမ၊ ဒါပေမယ့် အမြဲတော့ သောက်မရဘူး ပြောတယ်:” “အင်း” “ညကျရင်လည်း သောင်ဖို့မမေ့နှင့်ဦး” “အင်းပါမောင်ရဲ့… ဒါနှင့်မောင်.. မောင်တို့ယောက်ျားလေးတွေက အပျိုအအိုက မြင်တာနှင့် သိတယ်ဆို” “ဘယ်သူပြောလို့လည်း” “ပြောသံကြားဖူးတာ” “မြင်ရုံနှင့်တော့ မသိနိုင်ဘူး” “လမ်းလျောက်ရင်ကော သိနိုင်လားဟင်” “မောင်တော့ မခွဲခြားတတ်ဘူး” “ပြောပြပါဦးမောင်၊ မလမ်းတောင်မလျှောက်ရဲဘူး” “မသိနိုင်ပါဘူးဗျာ” “တကယ်နှော်” “ဟုတ်ပါတယ်ဆို” “မပြန်တော့မယ်” “မောင်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ” “မပို့နှင့် မောင်အတူတူမသွားရဲဘူး” “ပြီးတာပဲ” ကျမအဆောင်ကိုပြန်လာလိုက်တယ်။
လမ်းမှာလည်း စိုးရိမ်ပူပန်မွုတွေနှင့်ပေါ့၊ တချိန်လုံးလည်း မောင်နှင့်ဖြစ်ပျက်သမျှပဲ မြင်ယောင်နေတယ်၊ လုပ်တာကိုင်တာတွေကလည်း အလွဲလွဲအမှားမှားပေါ့၊ လုပ်ရင်းနှင့်ငေးငိုင်နေလို့ အတူနေ အမကြီးကတောင် ပြောနေသေးတယ်။ ညဆယ်နာရီလောက်တော့ ဆေးထပ်သောက်လိုက်တယ်။ မနက်ကျတော့ ဓမ္မတာလာတယ်နည်းနည်းပေါ့။ ကျမကြောက်လိုက်တာရှင်၊ လာရက်မဟုတ်ပဲ လာတယ်လေ။ နောက်တရက်မောင်နှင့်တွေ့တော့ ကျမရှက်နေတာ၊ မောင်ကတော့ အေးအေးဆေးဆေး။ “မ..ဘာထူးခြားလဲ” “အချိန်အခါမဟုတ်ပဲ မိုးရွာတယ်မောင်” “ဟင်……ဩော်ဟုတ်လား၊ ကျနော်ပြောဖို့ မေ့သွားတာမ” “စာထဲမှာရေးထားတယ်၊ အဲဒါဆို မစိုးရိမ်တော့နှင့်” “အင်း..မစိုးရိမ်တော့ဘူး” နောက်တပတ်တနင်္ဂနွေမောင်ချိန်းတယ်၊ ကျမလည်း သွားလိုက်တယ်၊ ကျမသိပ်မကြောက်တော့ဘူး၊ ပထမတကြိမ်ပြီးပြီလေ၊၊ နောက်ပြီး ကာမအရသာကိုလည်း သိသွားပြီ။ နေ့လည်ထမင်းစားပြီး မောင့်ဆီကိုသွားလိုက်တယ်။ မောင်က အခန်းဝကစောင့်နေပြီးခေါ်တယ်။ ကျမအဝတ်အစားအပိုထည့်သွားတာ၊ အခန်းထဲရောက်တော့ “မောင်ခဏနှော်.မ.အဝတ်အစားတွေလဲလိုက်ပါ့မယ်” “သွားလေ..မ” ကျမလည်းရေချိုးခန်းဝင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး အဝတ်အစားလဲထွက်ခဲ့တယ်” “လာလေ.မ” “မောင်ကလည်းကွာ.. စကားလေးဘာလေး ပြောပါရစေအုံး” “အာ.မကလည်း.အိပ်ရာထဲမှာပြောရအောင်နှေိာ” “ဟင်းပြီးရင် လုပ်အုံးမှာ မသိတာကျနေတာပဲ” “ဟင်းးးးဟင်းးးးးး.. မ..ဟိုတနေ့က သွားရလာရအဆင်ပြောလား” “ပြေတယ်၊” မောင်ကပြောရင်းဆိုရင်းပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်တယ်၊ သူ့လီးကကြီးက ထောင်နေပြန်ပြီ။ “မ.ကိုင်ပေးဦးလေ” “လူဆိုးလေးကွာ၊ဒါကြီးပဲ ကိုင်ခိုင်းနေတယ်” ကျမလည်းသူ့ဟာကြီးကိုပဲ ကိုင်ကြည့်ချင်နေတာမို့ ကိုင်ပေးလိုက်တယ်၊၊ အဲဒါကြီးကိုင်လိုက်တာနှင့် စိတ်ကတစ်မျိုးဖြစ်လာပြီး ဂွင်းပါထုလိုက်သေးတယ်။ မောင်က ကျမကိုနမ်းပြီး နွူတ်ခမ်းကိုပါစုပ်လိုက်တော့၊ စိတ်ထဲမှာလုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကတဖြေးဖြေးနိုးထလာတာပေါ့။ မောင့်ကနမ်းနေရင်း နို့ကိုပါပွတ်သပ်ပေးတော့ အလိုးခံချင်တဲ့စိတ်က ပိုပြီးထကြွလာတာပေါ့ရှင်။ ကျမကလည်း အဝတ်စားလဲကတည်းက အတွင်းခံတွေချွတ်ထားခဲ့တာလေ။ “မ.” “ဟင်..” “မောင့်ကိုမွုတ်ပေးပါလား” “မောသ်ကပူလို့လား ယပ်ခပ်ပေးမယ်လေ” “အာ.မကလည်း မောင့်လီးကိုပြောတာ” “အော် အင်းအင်းမွုတ်ပေးမယ်” “ဖူး..ဖူး..ဖူး” “အာ..မ..နော်” “ခစ်….ခစ်..ခစ်” ကျမသိရဲ့သားနှင့် မောင့်ကိုနောက်နေတာလေ။ ကျမရယ်လိုက်ပြီးမှ မောင့်လီးကိုငုံစုပ်လိုက်တယ်။ “ပြွတ်..ပြွတ်” “အားး..မ..ရယ်ကောင်းလိုက်တာ” မောင်ကကောင်းတယ်ဆိုတော့ ပိုကောင်းအောင်လိူ့ ကျမသူ့ဒစ်ကလေးကို လျှာဖျားနှင့်ယက်လိုက်တယ်။ “ပလပ်..ပလပ်” “အားး..ရှီး..ရှီးးး.ကောင်းလိုက်တာဗျာ” ကျမအားတက်လာပြီး လီးကိုပါးစပ်ထဲသွင်းပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် မြန်မြန်လေးလုပ်ပစ်လိုက်တော့တယ်။ “ပြွတ်..ပြွတ်..ပြွတ်” “အားးးူးအာ့..အဟင်းးဟင်းကောင်းလိုက်တာ.မ.. ရယ်” သူ့လီးစုပ်ရင်းကျမပိပိထဲက အရည်တွေ ထွက်လာတော့တယ်။ “မ..တော်ပြီ..တော်ကြာ မောင်မလုပ်လိုက်ရပဲနေမယ်” “ရပြီပေါ့၊ ကျေနပ်သွားပြီလား” “အင်းး.. မ..အိပ်လိုက်ပါလား” ကျမလည်းအိပ်လိုက်တယ်။
ကျမအိပ်တော့ မောင်ကနို့စိုးပေးတော့ ကျမက. ကာမဆိပ်တက်နေပြီလေ၊ ညည်းမိတာပေါ့၊ မောင့်ကနို့ဝန်းဘေးသားတွေကိုလည်း လျှနှင့်ယက်တယ်၊ နို့တွေကိုလည်းစို့တယ်။ ကျမနို့ငီးခေါင်းလေးတွေ ထောင်ထတဲ့အထိ မောင်က ကျမနို့ကိုစို့လိုက်တယ်၊ ကျမပိပိတစ်ခုလုံးလည်း ရွဲနေပြီ၊ မောင်ကနို့စို့ရင်း ပိပိကိုပါ နှိုက်နေသေးတယ်၊ အစေ့လေးကို ပွတ်ပေးတော့.. ကျမမှာ တဆတ်ဆတ်တုန်သွားရတယ်။ မောင်က ကျမပိပိကို ရွတ်ကနဲနမ်းလိုက်တယ်။ “အာ့..မောင်ဘုန်းနိမ့်မယ်မလုပ်နှင့်” “လုပ်မှာပဲ.လက်စားချေတာ” “မလုပ်ပါနှင့် မောင်ရယ်” “ပြွတ်..ပလပ်” “အာ့..အိုး………” တားနေတဲ့ကြားက မောင်က ကျမပိပိကို လျှာနှင့်အပြားလိုက်ယက်ပေးတယ်။ “အာ့..မောင်တော်ပါတော့နှော်” “ပလပ်ပလပ်” “အာ့..အင်းးဟင်းးးးးးး” တားနေသည့်ကြားထဲက ကျမပိပိထဲသူ့လျှာထိုးပြီး မွေလိုက်တာ၊ ဒီအရသာကတစ်မျိုးပါ။ စိတ်တွေဆူဝေလာသလို ခံစားရတယ်လေ။ “အားလားးလားးမောင်ရယ်” “ပလပ်..ပလပ်..ပလောက်” “အာ့..အင်း..ဟင်းးးးဟင်းးးးးး” ကျမအရမ်းကိုစိတ်လွုပ်ရှားသွားပြီး ညည်းလိုက်မိတယ်။ မောငိက ကျမဖီးစေ့ကို လျှာနှင့်ဖိသိပ်လိုက် ကလော်လိုက်နှင့်မို့လို့ ကျမလည်း အရမ်းကို စိတ်ကကြွတက်လာတော့တယ်။ ခါးကလည်း အိပ်ရာပေါ်ကကြွတက်နေတာပေါ့။ “ပြွတ်..ပြွတ်..ပြွတ်” “အား..အီး..အိုး..ကျွတ်…..ကျွတ်… အားးအင်းးးးဟင်းးးး” လူတစ်ကိုယ်လုံးတုန်တက်သွားတော့တယ်။ “အားးတော်ပြီမောင်” “ဘုန်း” အိပ်ရာခင်းပေါ် ကျမခါးပြန်ကျလာတာလေ၊ တကိုယ်လုံးတုန်သွားပြီး လွတ်ထွက်သွားသလို ကာမစိတ်က အရမ်းပြင်းပြလာတယ်၊ “အားမောင်ရယ်လုပ်ပါတော့လားမောင်ရယ်” “အဲဒါဆိုမောင်လုပ်တော့မယ်နှော်” “လုပ်တော့” မောင်လေကျမပေါင်နှစ်ချောင်းကို ပူးကပ်ပြီး ကျမရင်ဘတ်နှင့်ထိလုနီးပါး ကွေးတင်တယ်။ ကျမထင်တယ်။ အဲလိုပုံဆိုရင် ကျမပိပိနောက်မှာ ပြူးထွက်နေလောက်တယ်။ မောင်က အပေါ်ကခွလာပြီး ကျမပိပိထဲ လီးထိုးထည့်တယ်။ “ပြွတ်.ပလွတ်.” “အာ့မောင်ကျပ်တယ်” “ကျပ်မှာပေါ့ မောင်က ပေါင်ကိုစေ့ပြီးပူးထားတာကိုး” “ဗျစ်..ဗျစ်..ဗျစ်” “အာ့..အင့်ဟင့်..ဟင့်.မောင်” “ဇွိ..ဗျိ..ဘွတ်..ဖတ်..ဖတ်…ဘွတ်” “အင့်..ဟင့်..ဟင့်.အင့်” သူ့လီးကကျပ်သပ်ပြီးဝင်လေ. ကျမမှာပိုပြီးအရသာရှိလေ၊ လီးကလည်း တဇွိ..တဖတ်.ဖတ်၊ တဘွတ်ဘွတ်ဝင်နေတာ ငါးမိနစ်လောက်မှာ ကျမအရသာတွေ အပြည့်ရပြီး တုန်တက်လာတယ်။ “အာ့ရှီးးရှီး..မောင်.မြန်မြန်..မ..ပြီးတော့မယ်” “ဇွိ..ဗျိ..ဘွတ်..ဖတ်..ဖတ်…ဘွတ်” “အာ့ရှီးးရှီးး.အား.ပြီးပြီမောင်.အား” “”ဘွတ်..ဖန်း.ဖန်းးဖန်းးဖန်းးးး” “အူး..အားးမောင်လဲပြီးတော့မယ်” “မောင်အထဲမှာမပြီးနှင့်ဆေးထပ်မသောက်ချင်ဘူး” ကျမက ဟိုတရက်ကဆေးသောက်ပြီး ဓမ္မတာလာတာ ရက်ကမမှန်တော့တဲ့အတွက် ဆေးမသောက်ချင်ဘူးလေ။
“မ..ပါးစပ်ထဲပြီးချင်တယ်” “အာ.မောင်ကလည်းကွာ” “မောင်ဗီဒီယိုကားတွေမှာမြင်ဘူးတယ်.မ.” “မောင်ကလည်းအဆန်းတွေလုပ်ပြန်ပြီ” “လုပ်ကြည့်ပါ မရဲ့” “အင်း..လုပ်ကြည့်ပေါ့” မောင်ကကျမရင်ဘတ်ပေါ်ခွပြီး ပါးစပ်ထဲ လီးထည့်တော့ ကျမကစုပ်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒါကို မောင်ကအားမရဘဲ ကျမပါးစပ်ထဲ လိုးတော့တယ်။ နှစ်မိနစ်လောက်ကြာတော့ သုတ်တွေပန်းထွက်တယ်။ “အော့..ဝေါ့” အရသာတစ်မျိးကြီးနှင့် စူးရှပြီးအနံပြင်းတဲ့အတွက် ကျမအော့အန်မိပြီး အိပ်ရာဘေး ထွေးထုတ်လိုက်ရတော့တယ်။ “မောင်.ထကွာ၊..မ.အန်ချင်လို့” မောင်ထပေးတော့ ကျမလည်း ရေချိုးခန်းမှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး အန်တော့ မောင်က ကျမကျောကိုနှိပ်ပေးတယ်လေ၊ နောက်တော့ ရေခပ်ပေးတော့ ကျမပလုတ်ကျင်းပြီး ပါးစပ်ကို ဆေးလိုက်ရတယ်။ လူလည်း ချွေးတွေပြန်ကုန်တာပေါ့ရှင်၊ အဲနေ့ကစပြီး မောင်က ပါးစပ်ထဲမှာမပြီးတော့ပေမယ့် နောက်တစ်မျိုး အဆန်းလုပ်ပြန်တယ်ရှင်။ “မ..နေလို့ကောင်းသွားပြီလား” “အင်းကောင်းသွားပြီ” “မောင်ကထပ်လုပ်ချင်သေးတယ်၊” “တစ်ခါဆိုတော်ရောပေါ့မောင်” “မောင်မှမဝသေးတာ” “မောင်ကလည်း ဆိုးပြန်ပြီကွာ” “မ..ဆေးသောက်ရမှာကြောက်တယ်မောင်” “မ..ကဆေးမသောက်ချင်ဘူးပေါ့” “အင်း..အဝှာမမှန်ဘူးမောင်ရဲ့” “မောင်ကလည်း အဲဒီအထဲမပြီးရရင် အာသာမပြေဘူး..မ” “အဲဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲမောင်၊.. မပါးစပ်ထဲထည့်တော့ အန်ချင်တယ်” “မောင်..ကြားဖူးတာရှိတယ်..မ” “ပြောလေ” “တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေက ဗိုက်မကြီးအောင်လို့. အဖုတ်ကို အလိုးမခံကြဘူးတဲ့” “ဟင်..ဟုတ်လား” “ဟုတ်တယ်..မ၊ သူတို့က ဖင်ပဲအလုပ်ခံတာတဲ့” “ဟုတ်ပါ့မလားမောင်ရယ် အဲဒါဆိုနာမှာပေါ့” “အဝမှာပဲ နာတာတဲ့ အထဲရောက်ရင် မနာတော့ဘူးတဲ့” “လျောက်ပြောနေတာ၊ ဝမ်းချူရင်တောင် နာတာ၊ အဲဒါကသေးသေးလေး၊ မောင့်တို့ဟာတွေက အကြီးကြီး” “နောက်ပြီးအစသာနာတာတဲ့ နောက်ကျရင် မနာတော့ဘူးတဲ့” “မောင်ရယ်..ကွန်ဒွန်သာဝယ်ပါကွာ၊ ဖင်တော့ မလုပ်စေချင်ဘူး” “မ..ကလည်း.. အလွာပါးပေမယ့်. တဘဝခြားသလို ခံစားရတယ်တဲ့၊ အဲဒါကြောင့် ကွန်ဒွန်မသုံးချင်ဘူး” “ရှေ့ပဲလုပ်ပါကွာ” “ကွန်ဒွန်မှမရှိတာမရယ်၊” “အဲဒါဆိုလည်း နောက်မှလုပ်ပါမောင်” “အခုလုပ်ချင်တာ တစ်ခါလောက်တော့ ခွင့်ပြုပါလား..မရယ်” “ဟင်း.သိပ်ပြီးအဆန်းလုပ်ချင်တာပဲ၊ ပြီးရင် အစရှိတနောင်နောင်နှင့်. ဒါပဲလုပ်နေရင် မခက်ဘူးလား၊ မသိတာကျလို့” “လုပ်ပါမရယ်” “နာမှာကြောက်လို့ပါမောင်” “မကြောက်နှင့် မနာအောင်လုပ်ပါ့မယ်” “လူဆိုးလေးကွာ.မရရအောင် တောင်းနေတော့တာပဲ” “လုပ်ပါ.မရယ်” “ကဲအဲလောက်လုပ်ချင်လည်းလုပ်..လုပ်” “ဟေး..ဒါမှချစ်..မ” “ြွပွတ်..ပြွတ်” လိုချင်တာရတော့ကလေးလိုပဲ၊ ကျမပါးကို တချွတ်ချွတ်နမ်းတယ်။
ကျမလည်း မောင့်ကို အဲလိုမြင်ရတာပျော်တယ်။ သူက အလုပ်ထဲမှာသာ ရုပ်တည်ကြီးနှင့် လူကြီးယောင်ဆောင်တာ၊ အခုကျမဆီကျတော့ ခလေးဆိုးကြီးလိုပဲ။ “မောင့်ကိုစုပ်ပေးပါအုံး” “ဟွန့်..လုပ်ပြန်ပြီ” ကျမ.မောင့်ကိုမျက်စောင်းထိုးလိုက်ပြီး သူ့လီးကိုစုပ်ရပြန်တယ်။ “ပြွတ်…ပြွတ်” “အဲဒါတွေကြောင့် မကိုအရမ်းချစ်နေတာ.. မောင့်တို့လက်ထပ်ရင်လည်း အဲလိုပဲ အမြဲအလိုလိုက်နှော်” “မောင်သာမကိုအသက်ကြီးလို့ဆိုပြီး ပစ်မသွားနှင့်” “တသက်လုံးမပစ်ဘူး” “ပြောတာပဲ” “ဘုရားမှာသစ္စာအတူတူဆိုမယ်..မ” “ပြီးရော” “ကဲ..မ..ကုန်းပေး” ကျမလည်းကုန်းပေးလိုက်တယ်။ မောင်က ကျမဖင်ကိုခေါင်းလိမ်းဆီတွေ သုတ်နေတာ၊ ဖင်ကိုကိုင်ခံရတော့ ယားကျိကျိနှင့် ခံရတယ်။ လက်ထဲဆီသုတ်ပြီး ဖင်ထဲကိုထည့်တယ်။ “ပလွတ်” “အာ့” လက်ကိုပြန်ထုတ်သွားတယ်၊ ဖင်ထဲကို ဆီထပ်သုတ်တယ်။ ပြီးတော့ပြန်သွင်းတယ်။ “ပလွတ်” “အာ့” အခုအခေါက်ပိုပြီးလက်ကအထဲဝင်လာတယ်။ ဒီတစ်ခါကျတော့ လက်ကိုအဆုံးထိမနွုတ်ပဲ တဝက်လောက်ထားပြီး ဆီကိုအပေါ်က လောင်းချတယ်၊ ဆီကရွဲရွဲစိုနေတာပဲရှင်။ ဆီလောင်းချပြီးတာနှင့် လက်ကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ကို သွက်သွက်ကလေးလုပ်တယ်။ ကျမခံနိုင်ပြီ။ မနာတော့ဘူး၊ ဒီအချိန်မောင်က လက်နှစ်ချောင်းထပ်ထည့်တယ်။ “အာ့..မောင်..နာတယ်” မောင်လေလက်နှစ်ချောင်းကို ကားလိုက်ပြီး ကျမဖင်ကိုဖြဲတာ၊ နောက်တော့ လက်နှစ်ချောင်းကြားက ဆီတွေဝင်လာတယ်။ တော်တော်မလွယ်တဲ့မောင်၊ သူလူပ်ချင်တာကို မရမက အတင်းလုပ်ယူတယ်လေ။ ဆီထပ်ထည့်ပြီး လက်နှစ်ချောင်းကို အသွင်းအထုတ်လုပ်ပြန်တယ်။ ဖင်ကိုရွုံထားရင်နာလို့ ကျမမှာ ရသလောက်လျော့ထားရတယ်။ လက်အသွင်းအထုတ်လုပ်တာ မနာတော့ပဲ ကောင်းလာတယ်ရှင့်။ ပိပိထဲကလည်း ရွစိရွစိဖြစ်နေတာပေါ့။ နောက်တော့ မောင်က လက်နှစ်ချောင်းလုံးဆွဲထုတ်သွားပြီး ခဏနေတော့ ကျမတင်သားနှစ်ခြမ်းဖြဲပြီး လီးကိုထိုးထည့်တယ်။ “အာ့မောင်ဖြေးဖြေးနှော်” “ဟုတ်..မ” “ပြွတ်…ဗျစ်..ဗျစ်…” “အာ့..အင့်..ဟင်းးးးးးး” လီးကလက်ထက်ရှည်တော့အောင့်လာတယ်။
မောင်က တဝက်ကျော်ကျော်လောက်ထည့်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်တာ၊ တဖြေးဖြေးနှင့် ဖင်ကဇိမ်တွေ့လာတော့ ကျမလည်းညည်းမိတယ်။ “ဗျစ်..ဗျစ်..ဘွတ်..ဖတ်..ဖတ်” “အိုး…အာ..အာ့အင်းဟင်းးးဟင်းးး” တဖြေးဖြေးလိုးရင်းမောင့်ဆီးခုံကြီးက ကျမတင်ပါးမှာ လာထိတော့ မောင့်လီးအဆုံးဝင်သွားပြီဆိုတာ ကျမသိလိုက်တယ်။ “ဗျစ်..ဘွတ်..ဖတ်..ဖတ်..” “”အာ့..အင့်..ဟင်းးဟင်းးအာ့..ရှီးး..ရှီးး” ကျမဖင်ထဲမှာ ဇိမ်ရှိပြီးပိပိထဲမှာပြီးချင်လာတယ။ “အာ့.မောင်..မပြီးတော့မယ်” :”ဇွိ..ဗျစ်..ဗျစ်…ဇွပ်ဖတ်..ဖန်းဖန်း.ဖန်း” “အာ့..အားးးပြီးပြီ.ပြီးပြီမောင်.အား” “အိုး..ကျနော်လည်းပြီးပြီ..အားးရှီးးးအားးး” မောင်လည်းပြီးတော့ ကျမလည်း အိမ်သာသွားရသလို မောင်လည်းပဲ ရေချိုးခန်းဝင်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတော့တယ်။ ဒီလိုနှင့်ကျမနှင့်မောင်ရဲ့ချစ်သက်တမ်းက ခြောက်လကျော်လာတယ်။ မောင်ကတော့ ရှေ့ပေါက်လုပ်လိုက် နောက်ပေါက် လုပ်လိုက်ပေါ့။ ကျမကလည်း မောင့်ကိုချစ်လွန်းလို့ အမြဲအလိုလိုက်ခဲ့တယ်။ တရက်မှာ အဖေလေသင်ဒုန်းဖြတ်လို့ ဆုံးတယ်ဆိုလို့ ကျမမြို့ကို ပြန်သွားရတယ်။ မောင့်ကိုတောင် အသိမပေးနိုင်ဘူးလေ၊ အိမ်မှာနာရေးအတွက် အလုပ်တွေရွုပ်ပြီး၊ မောင့်ကိုသတိရပေမယ့် ဖုန်းဆက်ပြီး မပြောနိုင်ဘူး၊ ရက်လည်တော့ မောင့်ဆီက အဆက်အသွယ်ရတယ်၊ ကျမသူ့ကို ဖုန်းနံပါတ်ပေးမထားဘူး၊ သူက ကျမတို့ရုံးက တောင်းပြီးဆက်တာ၊ ကျမမောင့်အသံကြားတော့ ငိုပစ်လိုက်တော့တယ်။
ကျမမှာမောင့်ကိုချစ်ပေမယ့် စွန့်လွတ်ရမယ့်အကြောင်းတရားပေါ်လာတယ်လေ၊ အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးက ကျမလုပ်ရတော့မယ်၊ အကိုအကြီးဆုံးက ကျန်းမာရေးမကောင်းတော့ အိမ်ကကိစ္စအဝဝ ကျမအပေါ်ကျခဲ့ပြီ၊ စားဝတ်နေရေးအတွက် ကျမအိမ်အလုပ်တွေ လုပ်ရမယ်။ အိမ်စီးပွားရေးက တံငါနှင့် လယ်ပဲရှိတယ်။ ကျမမောင့်ကို ကျမဘဝထဲမခေါ်ရဲဘူး၊ သူ့လိုလူအတွက် ကျမတို့မြို့မှာ အလုပ်မှမရှိတာလေ၊ သူသာကျမနှင့်လက်ထပ်ရင် လယ်လုပ် တံငါလုပ်ဆိုတော့ သူ့ပညာနှင့်လားလားမှ မအပ်စပ်ဘူး၊ ကျမသူ့ကိုလက်ထပ်ရင် ပညာသင်ပေးတဲ့ သူ့မိဘတွေနှင့် ကျမတစ်သက်လုံး အဆင်ပြေမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ကျမသူ့ကို့ စွန့်လွတ်ရတော့မယ်။ ကျမရင်နာနာနှင့်ပဲ ဆုံးဖြတ်ရပါတော့တယ်။ နောက်တရက် တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီး ကျမတို့အိမ်ဖက်လိုက်လာတယ်၊ ကျမသူ့ကို ထွက်မတွေ့တော့ဘူး၊ မေမေ့ကိုသာ တွေ့ပြီးပြန်ခိုင်းလိုက်ရတယ်။ သူကတည်းခိုခန်းမှာ တည်းပြီး ကျမအဒေါ်အိမ်ကို ဖုန်းဆက်တယ်၊ အဒေါ်တို့ကလည်း သဘောပေါက်တော့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲ ဖြေကြတယ်။ သူကလည်း သူပြန်မယ့်အကြောင်းပြောတယ်။ ကျမဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပြီး မောင်လေးကိုခေါ်ကာ အိမ်ကထွက်လာလိုက်တယ်၊၊ ကားဂိတ်မှာ သူ့ကိုကျမတွေ့တယ်။ ကျမအဝေးကသာ မောင့်ကိုနောက်ဆုံးအနေနှင့် ကြည့်တာ၊ ကားပေါ်တက်ပြီး ကားထွက်သွားမှ ကျမအဲဒီနေရာမှာ အားရအောင် ငိုပစ်လိုက်ပြီး၊ အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တယ်။ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ချစ်ခြင်းတရားကို မိသားစုရဲ့အခြေအနေနှင့် ကျမလဲလိုက်တယ်ရှင်၊၊ ကျမတကယ်ချစ်ခဲ့ရသူဖြစ်လို့ ကျမဘယ်သူ့ကိုမှ လက်မထပ်တော့ပဲ အမေနှင့်ပဲနေခဲ့တော့တယ် ………… ပြီးပါပြီ။